Semantic Web iyo Web of Xogta
Koorasku wuxuu ku siinayaa tababar ku saabsan shabakada xogta iyo heerarka shabakada semantic. Wuxuu ku bari doonaa luqadaha kuu ogolaanaya:
in la matalo oo lagu daabaco xogta ku xidhan Shabkada (RDF);
si aad u waydiiso oo aad u doorato xogtan si aad u fog iyo iyada oo loo marayo Webka (SPARQL);
waxay matalaan erayada iyo sababta oo ka soo saar xog cusub si ay u kobciyaan sharraxaadaha la daabacay (RDFS, OWL, SKOS);
iyo ugu dambeyntii, in la sawiro oo la socdo taariikhda xogta (VOiD, DCAT, PROV-O, iwm.).
Koorasku wuxuu u qaybsan yahay 7 toddobaad + 1 toddobaad oo gunno ah oo gebi ahaanba u go'ay Dbpedia. Waxa ku jira si buuxda ayaa loogu heli karaa qaab ahaan is-xakamaynta, yacni ku fur qaab wakhti dheer ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad hore ugu socoto xawaarahaaga. Dhammaan taxanaha koorsadu waxay soo bandhigayaan fikradaha koorsada oo leh waxyaabo badan oo kala duwan: fiidiyowyo, su'aalo, qoraallo iyo xiriirin dheeri ah + bandhigyo badan oo muujinaya codsiyada farsamooyinka la soo bandhigay. Dhammaadka usbuuca kasta, layliyo iyo jimicsi qotodheer ayaa la bixiyaa.
Semantic Web iyo Web of Xogta Diisambar 18, 2021Tranquillus
READ Caafimaadka Aadanaha
horeTababarka wax lagu baro tacliinta sare
socdaFahamka sharciga qandaraasyada shaqada
Aasaaska Awooda Microsoft BI ee Bilowga ah
Qalabka Mashruuca: hordhaca - Dejinta iyo Maalgelinta Mashruuca
Shahaadada Aqoonta Xirfadeed (CQP)
Dib-u-tababar xirfadeed oo ah qalab lagu hagaajinayo tayada nolosha